नेपाली सेनामा जागिर खान चाहानुहुन्छ ? अहिलेसम्मकै ठूलो संख्यामा कर्मचारी मागियो कर्मचारी – Gazabkonews
नेपाली सेनामा जागिर खान चाहानुहुन्छ ? अहिलेसम्मकै ठूलो संख्यामा कर्मचारी मागियो कर्मचारी
काठमाडौं – नेपाली सेनामा जागिर खुलेको छ । भर्ना छनोट निर्देशनालय कार्यरथी विभाग जंगीअड्डाले २९४ जनाकाे लागि विभिन्न ११ पदमा भर्ना खुला गरेको हो ।
लेखा जमदार, पुजारी हुद्दा, अमल्दार कर्मचारी, बन्दोबस्ती कार्य सिपाही, सुचिकार, कुचिकार, चर्मकर्मी, लोहकार, धोबी, केशकर्तक र सयस पदहरुमा २९४ जनाको भर्ना खुलेको हो ।
नेपाली सेनामा जागिर खान इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले पुस २१ गतेदेखि माघ २१ गतेसम्म दरखास्त दिन आह्वान गरिएको छ ।
शाहरुख, सलमानको भन्दा बढी कमाउँछन् कपिल शर्माले, उनको सम्पत्ती सुनेर पर्नुहुनेछ तपाई चकित
काठमाडौं – भारतकै चर्चित हाँस्य कार्यक्रम हो ‘द कपिल शर्मा शो’ । यस कार्यक्रमलाई कमेडियन कपिल शर्माले लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।
दर्शकलाई शव्दै पिच्छे हसाउने कला भएका कपिलको शो धेरैले रुचाएका छन् । कमेडियन शर्माले यस शोबाट कति कमाउछन् होला भन्ने चासो सबैको हुन्छ ।
भारतका चर्चित कमेडियन कपिल शर्मा । उनले लामो समयदेखी हाँस्य कार्यक्रम ‘द कपिल शर्मा शो’ सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । भारतिय मिडियाका अनुसार उनले यस शोबाट बलिउडका कलाकारभन्दा बढी कमाई गर्ने बताइएको छ ।
उनले बार्षिक ३० करोड कमाई हुने बताइएको छ । उनको सम्पत्ति १७० करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । उनको ३ गाडीहरुको मुल्य नै ८ करोड रुपैयाँ र घरको मुल्य २५ करोड भन्दा बढीको रहेको छ ।
यि हुन् चर्चित गायिका ईन्दिरा जोशीका प्रेमी, प्रेमिसहित अन्तरवार्तामा आएर गरिन् विबाह र भविष्यबारे रमाइलो कुराकानी
काठमाण्डौ – गायिका ईन्दिरा जोशी र नायक कर्माबीच प्रेम रहेको कुरा खुल्न आएको छ । उनीहरु एकअर्कालाई मन पराएको र माया गरेको कुरा बाहीरिएपछि अहिले बिहेको कुरा पनि उत्तिकै चर्चाको विषय बनेको छ ।
दुवैको जोडी निकै सुहाएको भनेर उनीहरुका फ्यानहरुले प्रतिकृया दिएका छन् । ईन्दिराको बिहेको पर्खाईमा रेहका उनका फ्यानहरुले यो कुरा थाहा पाएपछि आफ्नो खुशीलाई सामाजिक सञ्जालमै व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी नायक कर्माका फ्यानहरुले पनि इन्दिरासंगको प्रेमको चर्चा थाहा पाएपछि उनलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् ।
यसैपनि यी दुवै नै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा निकै नै सालिन् कलाकारको रुपमा चिनिन्छन् । यीनीहरु आफ्नो कामलाई लिएर पनि निकै नै संबेदनशील रहने कलाकारको रुपमा चिनिंदै आएका छन् । एक अन्तरवार्तामा यिनीहरु एकअर्काको प्रेममा रहेको कुरा स्वीकार गरेका छन् । जानकारीकालागी भनिदिंउ इन्दिरा र कर्मा वास्तविक जीवनमा नभई पर्दाकोलागी मात्र प्रेमी प्रेमीका बनेका हुन् ।
रियल लाईफकोलागी नभएपनि यिनीहरुको जोडीलाई सबैले मन पराएका छन् । रिल लाईफकै लागी भएपनि यिनीहरु एकअर्कासंग निकै नै रोमान्स गरेको देख्न सकिन्छ । वास्तविक जीवनमा बिहेको कुरा गर्दा यि दुवैले बिहेको विषयमा अहिले नै आफुहरुले सोंचि नसकेको बताएका छन् ।
अनिताको अप्रेशन असफल भएपछि भाबुक देखिए महान् श्रीमान् बिनोद, डाक्टरले फर्काइदिएपछि यसरी भक्कानिए, हे भगवान् के भयो अनितालाई ? हेर्नुहोस् भिडियो
सामाजिक संजालबाट सबैको मन जितेकी टिक टक बाट पनि उतिकै चर्चामा आएकी अनिता खड्काको अप्रेशन असफल भएको छ।उनि बिगत लामो समय देखि अस्पतालमा भर्न भएका थिइन।भगवान जस्तो श्रीमान पाएकी अनिताको उक्त अप्रेशन असफल भएपछि निकै भाबुक हुदै उनको श्रीमान बिनोद मिडियामा आएका हुन्।डाक्टरले यो पटक अप्रेशन हुन सक्दैन भनेपछि बिनोद दुखित भएका हुन्।
बिगत केहि बर्ष देखि अस्पतालको बेडमा जीवन संग लडाई गरिरहेकी अनिताको अबस्था झन् नाजुक भएपछि विनोदलाई तनाब थपिएको थियो हाल उनि राम्रो संग बोल्न सक्ने भएकी छिन केहि बुझ्ने पनि तर उनि अझै स्वस्थ हुन् सकेकी छैनन् उनको घाटीको ठुलो अप्रेशन असफल भएको हो यो पटक।
अझै अप्रेशन गर्न समय लाग्ने भएपछि बिनोद निराश भएका छन।उनको लागि झन्डै ५० लाख भन्दा बढी खर्च भैसक्दा पनि उपचारको टुंगो न लागेपछि बिनोद निराश हुदै उनको उपचारको लागि भए पनि खर्च जुटाउने भन्दै अब गाउँ फर्किने भएका छन।अनितालाई छाडेर गाउँ जादै छन बिनोद।हेरौ यो भिडियो :
पुरु राईको निर्देशनमा तयार भएको सर्ट फिल्म ‘सहारा’, ध्रुब दत्त, सृजना निङ्गलेवको अभिनय रुचाइयो
काठमाडौँ । पछिल्लो समय कोरोनाले सिर्जित अवस्थाबात थलिएको मनोरंजन क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्किदै छ । फिल्म निर्माण त भएका छन् नै प्रदर्शन पनि भइरहेका छन् । फिल्म हल वा डिजिटल प्लेटफर्ममा दर्शकले फिल्म हेर्न पाइरहेका छन् । नेपाली फिल्म र म्युजिक भिडियोको प्रवर्धनमा पछिल्लो समय बेलायतमा रहेका कलाकर्मी पनि उत्तिकै सक्रिय छन् ।
बेलायतबाट निर्माण भएको छोटो फिल्म ‘सहारा’ रिलिज भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्वभरी देखिएका विभिन्न समस्याहरुसँगै बेरोजगारी र आपसी सम्बन्धमा परेको असरलाई यसमा समेटिएको छ । ध्रुब दत्त, सृजना निङ्गलेव र पुरु राईको अभिनय रहेको सहारामा लेखन र निर्देशन पुरु राईको रहेको छ
पुरु निर्देशित यो दोस्रो छोटो फिल्म हो । फिल्मको छायांकन र सम्पादन कुशल श्रेष्ठले गरेका छन् । पछिल्लो समय बेलायतमा म्युजिक भिडियो निर्देशनमा अगाडी आउने नाम बनेका कुशल सञ्चारकर्मी पनि हुन् । यसमा संगीत आशिष राज, ब्याकग्राउण्ड म्युजिक र कलर नबिन निरौलाको रहेको छ ।